ကောင်းကင်ဖြူ: November 2012
ဆောင်းဟေမာန် ဆန်းထလို့ 
လေညင်းက သုန် ပြန်တော့
ခိုက်တုန်လို့ချမ်း …. ။
နှင်းငွေ့ လှုံ ပျော်မြူး
“ ချမ်းပါဘူး ” ဆိုကာမှဖြင့်
(အိုကွယ်) … ချမ်းဓာတ်က အရိုးစွဲပေါ့
ချမ်းခိုမို့ဟန်ပြင်
မမြင်နိုင်ပါ မှေးစက်ပျော် မျက်ဝန်းတွေက
မှီရာကို ဆွဲလို့ ခြုံ
အနံရယ်တို စောင်ငယ် လွှမ်းလို့ 
ချမ်းခို မိ လေ …….. ။
ချမ်းခိုလို့ချမ်းဓာတ်မပြေ
အောက်ပိုင်းဆီက တုန်းလို့ ချမ်း
မှေးစက်ရာ လန့် ကာ …. နိုး
(သြော်) ….. ငါ့နဲ့…. ဖြစ်ရမယ်
ဆောင်းမဲ့ တဲ့ နေရာမှာ
ဆောင်းည အိမ်မက်တွေနဲ့ 
ချမ်းနေပါရောလား …… ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:15 AM6comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:43 AM5comments